Flight zendiza Forums
FSX - FSX I-Steam Edition
Akukho neyodwa yamamodi afakiwe avela FSX futhi P3D
Umbuzo Akukho neyodwa yamamodi afakiwe avela FSX futhi P3D
Ngiyabonga wathola: 1
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule - iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #450 by I-StargateMax
Kuyamangaza ukuthi akekho omunye umuntu okhulume ngalokhu okwamanje.
Ngifake izengezo ezimbalwa zokubuka okuhle engizilandile kuleli sayithi, kucatshangelwa eyodwa noma zombili FSX futhi Prepar3D. Akukho neyodwa kwizimpawu zesibhakela ebonakalayo ku (ama) mdlalo. Izengezo zezindiza zisebenza kahle, kepha anginaso isifiso salokho.
Ngiphinde ngalanda le ndawo yaseHawaii, cishe i-7 Gb, neKauai nami. Konke engikubona kugeyimu yindawo ezenzakalelayo enomhlaza njengakuqala.
Ngabe yini inkinga?
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 izinyanga ezingu-8 ezedlule I-StargateMax.
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #451 by Dariussssss
Okokuqala, ngicabanga ukuthi kunokuhlonipha ukusho sawubona.
Okwesibili, ungangenzi ngikuxwayise.
Okwesithathu, imininingwane engaphezulu.
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #452 by I-StargateMax
1) Sawubona (ngiyaxolisa)
I-2) Lapha kufanele ngithi: Funda i-4 ngezansi.
I-4) Kulungile, angisekho, akukho zinkathazo nami, kubukeka sengathi sobabili sibheka njengonodwanayo.
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #453 by Gh0stRider203
Ngicabanga ukuthi ngiyayazi lena yaseHawaii enikhuluma ngayo. Ngenkathi kungakufaka INDLELA okufanele ukwengezwe kulo mdlalo, ngesandla. Akuqiniseki ukuthi kungani lokhu kunjalo, kepha kwesinye isikhathi kunjalo.
Uma ungaqiniseki ukuthi ungakwenza kanjani lokho lemme uyazi futhi ngingakusiza ngalokhu
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule - iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #454 by Dariussssss
Masikwenze kanjena ...
Okokuqala, kufanele ungitshele ezinye izinto ...
Ngabe wenze kusebenze indawo yakho FSX?
Yimaphi amaphakethe okukhanya ozama ukufaka kuwo?
Ngibe nenqwaba yezindawo ezilandwe lapha, futhi konke kuyasebenza, uma ukwenze kahle.
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 izinyanga ezingu-8 ezedlule Dariussssss.
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #457 by I-StargateMax
Ake siqale okusha, sizizwe ngcono ngaleyo ndlela. Siyaxolisa ngenhla.
Ngafaka leyo pakethi enkulu yeHawaii Photoreal vol 1-2-3, Kauai, Mt. I-Everest, Fiji, iziqhingi zeBalearic v2.
Abafake lo mshophi bathi bazofakwa ngokuzenzakalelayo futhi ngicabanga ukuthi bazokhonjiswa kumtapo wezincwadi weScenery.
Angibonanga lutho olusha ku-Scenery Library (yomibili imidlalo).
Ngemuva kwalokho ngabheka kufolda ye-Addon Scenery (yomibili imidlalo), futhi akukho lutho engangilufakile. Ngicabange nokuthi bafakwe ngokuhlukile, kepha angikwazanga ukubathola ukuze ngibangeze ngesandla.
Ngenkathi ngibhala le mpendulo lapha ngithole umzuzu wesibani esikhanyayo. Ngabheka kufolda yeScenery (hhayi i- "Addon") futhi ngabhekisisa phansi, ngabathola lapho! Ukuzifaka emtatsheni wezincwadi we-Scenery kusuka lapho kusebenza.
Ngicabanga ukuthi ixazululiwe. Ngiyabonga ngokubekezelela isimo sami sengqondo, ngangicasuke impela ngemuva kwezinsuku ze-2 zokuhlukumezeka nayo.
Ngiyethemba ukuthi lokhu okuthunyelwe kusiza noma ngubani omunye umuntu ongahlangabezana nenkinga efanayo nami.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: Gh0stRider203
iminyaka 2 8 izinyanga ezedlule #464 by Dariussssss
Nami ngenze into efanayo yenzeka.Awazi ukuthi kungani, kepha abafaka izinto ezimbi bayazenza. Isibuyekezo esisodwa esifanele siyadingeka ngempela.
Kuhle ukubona ukuthi kuyasebenza. Ngakho-ke manje usuyitholile ngokuzayo lapho okuthile kungasebenzi., Sitshele okuningi ngangokunokwenzeka, lokho kuzosisiza sonke ukuxazulula inkinga.
Abalinganisi bokuhlola emikhakheni: Gh0stRider203
Isikhathi ukudala page: 0.300 imizuzwana